Sawirro: Madaxweyne Erdogan oo Muqdisho looga banaanbaxay - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Madaxweyne Erdogan oo Muqdisho looga banaanbaxay
Sawirro: Madaxweyne Erdogan oo Muqdisho looga banaanbaxay
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka Gobolka Banaadir ayaa qabtay banaanbax looga soo horjeedo isku daygii xalay ka dhacay dalka Turkiga oo ciidamada militariga qaarkood ay wadeen.
Banaanbaxa ayaa waxaa waday qaban qaabadiisa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir waxaana lagu taageeray madaxweynaha dalka Turkiga Mr Erdogan.
Waxaa siweyn looga soo horjeedaa isku daygii Afgambi ee faashilmay kaasi oo ka dhacay dalka Turkiga, iyadoo maamulka gobolka uu sheegay iney muujiyeen sida ay Turkiga u taageersan yihiin midnimadooda.
“Banaanbaxan wuxuu ku saleysnaa oo maanta shacab weynaha Somaliyed ee Xamar degan isugu soo banaanbaxeen oo fagaaraha waaweyn ay isugu imaandeen iyadoo aanan qof ka hareyn, waxa ay aad iyo aad uga xun yihiin arintii ka dhacday dalka Turkiga aad ayeey uga soo horjeedaan”
“Shacabka Somaliyed waxay aad u taageersan yihiin Dowladda Turkiga oo walaalo gaar ah la leh Umadda Somaliyed, waxaan u soo baxeynaa Jiritaanka Dalka Turkiga.”Ayuu yiri Xalane.
Turkiga ayaa taageero kala duwan siiyay dowlada Soomaaliya, waana midda keentay in shacabka Soomaaliyeed ay sida walaalahood u dareemaan shacabka Turkiga.